Shiinaha TV Wall Bracket Flat Panel Janjeeri Mount HT001 (14 ″ -42 ″) warshad iyo soo saarayaasha | Zeno
Qaab No.: HT001
Ku habboon 15 ″ ilaa 42 panel Flat TV panel.
Awoodda xamuulka: 40kg max
U hoggaansamida Vesa: 50 × 50/75 × 75/100 × 100/200 × 100 / 200x200mm
Darajada Janjeer: 5 ′ ilaa + 15 ″
Dhismo fudud iyo rakibid fudud.
Cadaadis adag ayaa la baaray si loo hubiyo amniga, amniga, iyo nabadda maskaxda.
U hoggaansamaya Heerka VESA
Si dhakhso ah oo fudud loo rakibo - dhammaan qalabka ku habboon ee lagu rakibo qafiskan derbiga.
Maxaa sanduuqa ku jira
1 x TV Wall Mount Bracket for 15 ″ -42 ″ -HT-001
SAVE SPACE: Telefishankaaga ku dhaji darbiga si aad boos u badbaadiso. Muuqaalkayaga hoose ee foorarka hoose wuxuu hayaa dhabarka TV-ga kaliya 1. 2 ″ oo ka fog derbiga muuqaal qurxoon oo hagaagsan.
SAFE TO ISTICMAAL: Dhismaha birta oo tayo sare leh ayaa xaqiijiya nabadgelyada. Qeybtan TV-ga ee darbiga ah waxay leedahay heerar sare. Waxaa la tijaabiyay inay culeyska 4 jeer qaado si aad u nasan karto oo ay culeyska TV-gaaga u hayso. Waxa kale oo ay la timaaddaa farsamo quful leh si dhakhso leh loo sii daayo oo si fudud TV-gaaga ugu dhejisa darbiga.
Ku dil shaashad shaashad leh foorar aan dadaal lahayn. Qalabka janjeera ee la casriyeeyay wuxuu kuu oggolaanayaa inaad TV-ga ku hagaajiso fartaada oo keliya. Isticmaal buro-kacsan liinta si aad ugu habeeysid cabbirka shaashaddaada.
Ku rakibo wax ka yar 20 daqiiqo kaliya 3 talaabo. Waxaa kujira sheybaarka darbiga ee qodista walwal la’aanta ah. Nin caqli badan ayaa mar yiri "iska fududee, doqon," waanan dhageysanay. Adaa mudan.
Heerka wakhti kasta - xitaa kadib rakibidda! Haye, waxaan aaminsanahay fursadaha labaad. Xarig jiido ayaa kuu ogolaanaya inaad telefishanka ka saarto oo si ammaan ah aad ugu xirto adigoo gujinaya guji qanacsan.
Faahfaahinta faahfaahsan ee HT001:
Ku habboon: 15 ”-42”
Janjeeri: -5 ° / + 15 °
Awood xamuul: 40 kgs
Fogaanta gidaarka: 50mm
Gudaha Sanduuqa: 36.4 * 11.2 * 4.9cm
kumbiyuutarada / kartoonka 20
Sanduuqa Dibedda: 52 * 39 * 25.5cm
Hore: Bedelida Universal ee TV-yada Z500M
Xiga: TV Wall Mount Mooshin Buuxa P4